Taariikhda Pierre-Emerick Aubameyang - BBC News Somali
Taariikhda Pierre-Emerick Aubameyang
12 Nofembar 2016
Ilaa iyo intii uu ka billaabay mihnadiisa kooxda Borussia Dortmund, weerarka reer Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, aad baa loola dhacay.
Inkastoo uu kusoo ban baxey France, ayaa xiddigan loo magacaabay inuu u tartamo abaalamrinta BBC-da 2016. Waxaa ka soo muuqday kooxda AC Milan ee Talyaaniga - taasoo uu waligii ka ciyaarin, markii amaah ahaan loogga soo qaatey dhanka iyo kooxda Dijon.
Ciyaartiisii ugu horreysay waxey aheyd mid saaxiibtinimo xagaagii 2008-dii, markaa kadib ciyaary yahanka da'da yar ee 18 jirka ahi wuxuu tusay kuwii ka waa weynaa wacdaro.
"Markii aad ciyaar saaxiibtinimo tan ugu horeyso ka qeyb qaadato ee xagaaga, wali ma tihid qof diyaarsan, laakiin iyadoo aan la diyaarin, wuxuu ahaa nin si deg deg ah ula qabsadey, una eg qof durbadiiba la saan qaadey kooxda," sidaasi waxaa yiri FlorentPerraud, kaasoo ahaa xiligaa gool hayaha kooxda Dijon.
Toban gool ayuu dhaliyey Aubameyang xili ciyaareed yadii xigay.
Markaa kadibna, wuxuu si is xig xigta u qaadey safarkiisii dheeraa ee hanaqaadka dalalka Faransiiska, Columbia, Mexico iyo Talyaaniga (isagoo raacey saan qaadkii aabihii Pierre oo ciyaar yahan ahaa), amaah ahaan ayuu ugu soo wareegay kooxda Lille, ka gadaalna Monaco, iyadoo uu u wareegay St Etienne illaa uu soo gaarey 2011-kii, markaana ay haddana billaabeen iney dib usoo laba kacleeyaan.
Wixii intaa ka dambeeyay 2013-kii ayuu u wareegay kooxda Dortmund, isagoo u sii xawaareeyey wadadii uu ku gaarayay ciyaayahanka ugu wanaagsan ee dhanka weerarka ee dunida.
June 2016-kii, wuxuu ka noqday ciyaar yahanka sanadka ee ugu wanaagsan horyaalka Jarmalka ee Bundesliga - taasoo ay hadiyad magacaabistiisa ay ka qeyb qaateen ciyaar yahanno heer caalami ah oo ay jaal yihiin.
Sidoo kale wuxuu nasiib u helay inuu noqdo "Auba"-bee, ciyaar yahankii ugu horeeyey ee Gabon u dhasha, oo uu Xiriirka Kubadda Cagta Afrika u doorto ciyaaryahanka sanadka, halkaasoo ah heer ay hey'adda Kubadda Cagta Adduunka isugu geyso Ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee raga ah ee sanadka 2016-da.
Bilawgiisii waxaa lagu xasuustaa goolashiisa - 11 ciyaarood ayuu ka dhaliyey 9 gool horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, marka lagu daro afar ciyaarood oo 5 - 2 uga badiyey kooxda Hamburg - 89 gool marka loo eego tirada guud ee 152 kooxda Dortmund.
Sidoo kale si xawaare ah ayuu u koray - taasoo uu ku jaray masaafo aad u dheer marka la barbar dhigo Usain Bolt -iyadoo Aubameyan uu iska dhigo macallin ama jilaa marka uu dhaliyo gool.
"Wuxuu jecel yahay inuu kaftamo dadkana ka qosliyo - dhabtii waa qof fur furan wehel wanaagsanna ah," ayuu yiri Jordan Loties, oo ah ciyaar yahan ay ka wada ciyaari jireen kooxda Dijon.
Caannimadiisa ayaa keentay inuu soo xirto dhar aad qaali u ah, isagoo isticmaalaya kharash xad dhaaf ah. Aubameyang waa nin ku wanaagsan isa soo bandhiggida - halka marka uu isagu is qeexayo uu yahay qof yara xishooda.
"Si aad u adag ayaan u sameeyey tababaro, si aan u hagaajiyo xirfadeyda," Aubameyang, ayaa sidaasi u sheegay barnaamijka Sports-ka ee BBC-da.
Ciyaaryahan kubadda cagta ah oo da yar, kaasoo ciyaalnimadiisii banooniga kusoo qaatay meelo aad u hooseeya tayadooda, ka hor inta aanu Faransiiska ku matalin Kubadda Cagta heerka caruurta aan qaan gaarin, Aubameyang, ayaa calanka u qaaday xulka Qaranka Gabonese "Mukulaasha Madow", sidii uu horey u sameeyey aabihii.
"Waxaan u doortey Gabon iney Africa u matasho ciyaaryahan dhaxla kuwii ka horeeyey sida Drogba iyo Samuel Eto'o."ayuu yiri. "Laakiin si taasi u dhacdo, waa inaad abaal marino ku guuleysataa."
Haddaba ma laga yaabaa in maqaalkaamsi uu leehay ay baalmarinta BBC-da sii balalriso?
Halkan ka codee halkana ka eeg Qaabka iyo shuruudaha codeynta